Handball – CCOI: Nosy rahavavy 4 hanatevin-daharana - ewa.mg
News - Sport - Handball – CCOI: Nosy rahavavy 4 hanatevin-daharana
Ekipa miisa 13 no hiatrika ny fiadiana ny amboaran’ny kiloba tompondakan’ny ranomasimbe Indiana 2018 izay hotanterahina ao amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny 24 novambra hatramin’ny 1 desambra izao. Ekipa avy amin’ny nosy rahavavy miisa 9 no ho avy eto an-toerana hiatrika ity fifaninanana ity, dia i Maurice, La Réunion, Mayotte ary Seychelles. Tsy hita ao anatin’ny mpandray anjara kosa i Comores. Marihina fa ekipa 4 no misolo tena an’i Madagasikara hifanandrina amin’ireo ekipa 9 avy amin’ny nosy rahavavy ireo.
Raha tsiahivina ny tamin’ny taon-dasa, voatery natao tany Maurice ity fifaninanana ity noho ny fiparitahan’ny valan’aretina pesta teto Madagasikara. I Madagasikara izay voafidy handray ny CCOI, ny taona 2017 sy 2018 nefa noho io olana io dia amin’ity taona ity izany vao handray ny lalao ny firenena malagasy.
Ho fantatra ny fiandohan’ny volana desambra izao, araka izany, izay handimby ny toeran’ny AS Chateau Morange sy ny Jeunesse Saint Benoit, samy avy any La Réunion, ekipa nandrombaka ny amboara ny taona 2017.
Lisitry ny mpandray anjara (CCOI 2018)
1. COSFA (MAD)
2. AS SAINT MICHEL (MAD)
3. ST PIERRE HBC (REU)
4. CAHATEAU MORANGE (REU)
5. AS VACOAS (MAU)
6. ASC TSINGONI (MAY)
7. DURANTHA (SEY)
1. THBC (MAD)
2. AS TSIKY (MAD)
3. JEUNESS ST BENOIT (REU)
4. TAMPONNAISE (REU)
5. PC BOUENI (MAY)
6. CAP SISTER (SEY)
L’article Handball – CCOI: Nosy rahavavy 4 hanatevin-daharana a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 21/11/2018
Hifangaro indray ny fanasoketana ny fahalainan’ireo mpifidy nandritra ny latsa-bato, omaly sy ireo lesoka tamin’ny fanomanana ny fifidianana ho solombavambahoaka am-bolana maro ary ny fanitsakitsahana ny lalàna tamin’ny fampielezan-kevitra naharitra telo herinandro. Tsy fahombiazana no azo amehezana an’iny fifidianana nivalona omaly iny. Mby an-tsaina sahady ny ho endrikendrika sy ny toetoetry ny Antenimierampirenena atsy ho atsy. Fa ny mampanahy indrindra, dia mbola hantsoina haneho ny safidy amin’izay ho ben’ny tanàna hitondra ny kaominina indray Ramalagasy aoriana kely ao. Rehefa avy nahazo dera tamin’ny mpanara-maso ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy azo ihodivirana ny fifanolanana aterak’iny fifidianana solombavambahoaka iny. Tsy tokony hahagaga satria nifototra tamin’ny fanajàna ny voka-pifidianana natao tamin’ny taona 2018 no mba nanindraindran’izao tontolo izao antsika. Milamina ny fifidianana ho an’ny vahiny rehefa tsy nohobiana ny mpandresy ary tsy nakoraina ny resy. Nikipiana maso ny tsy fahatomombanana rehetra. Miverina indray izy izao, saingy variana tamin’ny ady maloton’ireo mpifanandrina politika ka nihoaran’ny zava-nitranga tanteraka, na ilay Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) na ilay Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (Hcc). Moa, toa nanapaka ny kofehin-tsoavaly ny tsy fitsabahan’ny iraisam-pirenena loatra tamin’ity raharaham-pifidianana tontosa omaly ity. Tsy voatazona izay azo tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany. Vao mainka ho sarotra tokoa ny fikatsahana ny lafatra amin’ireo fifidianana manaraka mbola hifandimby raha ny lesoka mihoapampana tamin’izao fifidianana ho solombavambahoaka izao. Ka ireo mpifidy nidongy ny tsy handray anjara tamin’ny fifidianana ve no diso, sa ireo mpikarakara izay tsy nahafehy ny zava-misy, sa ny Fitsarana toa mihazohazo amin’ny fampanajàna ny lalàna, sa ireo kandidà gaboraraka sa ny vahiny mpibedy izay namela antsika ho irery ? L’article Iza no diso ? est apparu en premier sur AoRaha.
En 2020, les États-Unis ont fourni 2,5 millions de fonds additionnel, consacrés spécifiquement aux réponses à l’épidémie de Covid-19. Un appui qui a permis de financer des activités comme la surveillance de cette maladie dans les communautés éloignées, l’éducation de santé publique concernant le coronavirus, et la fourniture d’équipements et de services médicaux. Ce fonds additionnel a été apporté en marge des autres soutiens financiers déjà apportés par le gouvernement américain à celui de Madagascar dans le domaine de la santé, et spécifiquement la lutte contre la Covid-19. En effet, durant cette pandémie, les États-Unis sont restés le plus grand bailleur bilatéral de Madagascar dans le domaine de la santé, en consacrant chaque année 62 millions de dollars aux activités de l’Agence internationale américaine pour le développement (USAID) dans le domaine de la santé. C’est ainsi qu’ont pu être réalisées diverses activités comme la réduction de la mortalité infantile et maternelle, l’amélioration de l’accès à l’eau potable et l’hygiène, la protection contre le paludisme, l’amélioration de l’accès au planning familial, le renforcement de la politique nationale de santé communautaire, ou encore la détection et le traitement de la Covid-19. Rappelons que les Etats-Unis ont également contribué à hauteur de 5 millions de dollars au programme de transfert d’argent « Tosika Fameno » destiné aux familles vulnérables qui ont subi de plein fouet les conséquences de la pandémie. Au niveau mondial, les États-Unis, avec l’élection de Joe Biden, entendent endosser le rôle de leader dans la réponse mondiale à la pandémie, à Madagascar et dans la région africaine. L’ambassadeur des Etats-Unis, Michael Pelletier, l’a du moins souligné lors de sa rencontre, hier, avec le coordinateur résident des Nations Unies, Issa Sanogo et le représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Charlotte Ndiaye. Une visite de courtoisie en signe de renouvellement de l’engagement des États-Unis en faveur de l’OMS. Au cours de la rencontre, l’ambassadeur Pelletier a réitéré la reconnaissance faite par le nouveau président des États-Unis pour le rôle vital de l’OMS dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, l’amélioration de la santé mondiale, et le rehaussement du niveau de préparation mondiale pour faire face aux futures menaces biologiques. Hanitra R. L’article USA – réponses à la Covid-19 : 2,5 millions USD de fonds additionnel en 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article USA – réponses à la Covid-19 : 2,5 millions USD de fonds additionnel en 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Haisoratra: naneho ny talentany i Riva
“Antsa am-pesiboky”… Io ny lohahevitra nentin’i Riva nanehoana ny talentany ho an’ireo mpankafy literatiora malagasy, nivantana tamin’ny tambajotran-tserasera “facebook”, ny alahady 18 avrily teo nanomboka tamin’ny 3 ora tolakandro. Naharitra 50 minitra teo izany. Novelomina tao avokoa ny ankabeazan’ireo sanganasa anisan’ny nahafantarana azy, toy ny “Sarin’ady”, ny “Kalon’ny manina”, ny “Hoentinay mankaiza”, ny “Iarivoko”… “ Ela tsy nifampizara teny an-tsehatra tamin’ireo akama tia sy mpanaraka ny haisoratry ny tena. Be koa ireo tapaka sy namana tena mila fialamboly kely amin’izao ady atrehina izao. Farany, ho fiarahabako an’i Neny, feno 60 taona omaly, alahady 18 avrily”, hoy ny nambaran’i Riva. Ny fanoratana sombintantara, tantara foronina, tononkalo, ny riankalo moa ny tena ahafantarana azy, anisan’izany ilay boky “Antaranoana”. Efa maro ny seho nanehoany ny maha izy azy ary efa nomen’ny minisiteran’ny Kolontsaina ny mari-boninahitry ny kanto ihany koa ny tenany. Ny talenta tsy mba mihiboka fa manana ny lalany hatrany ihaonana amin’ny mpankafy azy.NarilalaL’article Haisoratra: naneho ny talentany i Riva a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny tazomoka: Lay 13,7 tapitrisa haparitaka manerana ny Nosy
Natomboka tamin’ny fomba ofisialy, omaly, tany Vangaindrano ny fizarana faobe ny lay misy odimoka maharitra (Mid 2021).« Malagasy tsy ho fatin’ny tazomoka » no lohahevitra voizina mandritra ny hetsika fizarana lay misy odimoka maharitra atao any Vangaindrano, andiany fahadimy. Nanokatra izany ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, i Ntsay Christian.Mitondra aretina mahafaty toy ny dengue sy ny tazo ny moka, indrindra any amin’ny faritra mafana. Miisa 13,7 tapitrisa ireo lay misy odimoka maharitra hozaraina manerana ny Nosy amin’ity andiany fahadimy ity. Avy amin’ny Usaid sy ny President’s Malaria Initiative no nanolorana ny lay miisa 3,6 tapitrisa tamin’ireo.Mandrotsaka vola 26 tapitrisa dolara isan-taona ny governemanta amerikanina hiarovana ny vahoaka amin’ny tazomoka. Tamin’ny taona 2020, manodidina ny 2 tapitrisa ireo olona voan’ny aretina tazomoka ary anisan’ny voa mafy ny any amin’ny morontsiraka. Namoy ny ainy mihitsy noho ny tazo ny olona anjatony tamin’izany.Nandritra ny hetsika tao Vangaindrano, nisy koa ny fizarana fitaovana ho an’ny fitaleavam-paritry ny fahasalama ao Atsimo Atsinanana toy ny moto sy fiara mpitondra marary.Napetraka ny Asa Avotra MirindraOmaly ihany koa no nametrahana ny tetikasa Asa Avotra Mirindra ho an’ny Faritra Atsimo Atsinanana, izay nataon’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, i Ntsay Christian.Mahatratra 9.000 ny olona hisitraka ny tetikasa ho an’ny faritra Atsimo Atsinanana. Entina hanatsarana ny seha-pamokarana sy ho fampivoarana ny maha olona ny tetikasa. Misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny minisiteran’ny Mponina sy ny FID amin’ny fanatanterahana izany.Tatiana AL’article Ady amin’ny tazomoka: Lay 13,7 tapitrisa haparitaka manerana ny Nosy a été récupéré chez Newsmada.
Mitohy hatrany ny ady ataon’ireo mpitandro filaminana amin’ny resaka fanondranana zava-mahadomelina any amin’iny distrikan’i Betroka iny. Rongony milanja eo amin’ny 300 kilao eo indray mantsy no saron’ny zandary tao amin’ny Fangorolava, fokontany Ambalamary, kaominina Jangany, distrika Betroka ny voalohan’ny herinandro teo. Izany dia noho ny ezaka ataon’ny eo anivon’ny zandarimarim-pirenena amin’ny fisafoana andro aman’alina ataon’izy ireo any amin’iny faritra mena izay ikoizana amin’ny asan-dahalo sy amin’ity resaka zava-mahadomelina ity. Araka ny fampitam-baovao azo hatrany mantsy dia tsy manaraka lalam-pirenena intsony ireo olon-dratsy mpanondrana izany rongony izany amin’izao noho ireo savahao ataon’ireo mpitandro filaminana eny an-dalana. Aleon’izy ireo mihodidina amin’ireny tanana kely saro-dalana ireny, saingy mbola izao nahazoana vokatra izao ihany moa. Marihana fa tsy nampoizin’ireto olon-dratsy, izay mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika sy zava-maranitra isan-karazany ny fisian’ireo zandary mpanao fisafoana tany an-kebakeban-tany tany. Vao nahatazana ireto farany izy ireo dia rafitra nitsoka namela ireto entana, izay miteti-bidy an-tapitrisany any ho any teo. Gony feno rongony miisa enina teo izy ireo no sarona ary io milanja 300 kilao io, izay saika halefa ao Andiolava, alohan’ny hanaparitahana azy any amin’ny toerana farany hitodihan’izany. « Tsy maintsy atao ny fanenjehana ny fanondranana ny zava-mahadomelina, hampisy ny fandriampahalemana aty Betroka », hoy ny tompon’andraikitry ny zandary any an-toerana. Marihana fa tany amin’iny tapany Atsimon’ny nosy ihany no nahitan’ireo mpitandro filaminana ilay tany fambolena rongony amina hektara maro. m.LL’article Betroka : Rongony 300 kg indray saron’ny zandary a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nanombohan’ny ONG Medair ny hetsika « réveillons l’humani-terrien en nous » ny fanomezan-drà. Ny tontolo andron’ny 11 jona 2019 teny amin’ny trano fitehirizan-drà HJRA Anosy no nanatanterahin’ny ekipan’ny ONG sy ireo mpiara-miasa aminy ary ireo mpanohana ny hetsika « réveillons l’humani-terrien en nous » izany. Manentana ny olom-pirenena hanome rà maimaim-poana ny ONG. « Azo atao amin’ny alalan’ny fomba tsotra, tsy mandany vola nefa mamonjy aina ny fanomezan-drà, hoy ny talem-pirenen’ny ONG Medair eto Madagasikara. Ao anatin’ny fankalazana ny faha-30 taonan’ny Medair ity hetsika ity fanomezan-drà ity, araka fanazavan’ny tomponandraikitry ny serasera, Rakotomavo Chrystelle. Ankoatra fanatanterahana hetsika maro samihafa mandritra ireo andro manerantany momba ny fanampiana ny maha olona dia manana vina hanamboatra foto-drafitr’asa toy trano fonenana ho an’ireo traboina any Avaratry ny Nosy noho ny loza voajanahary sy fanamboarana tobin-drano any Atsimo ny Medair. Ny fanentanana ny daholobe ny tranga momba maha olona eto Madagasikara, ny famohazana ny fahatongavan-tsaina fa manana anjara andraikitra ny tsirairay amin’ny fanampiana ny maha olona, ny fanatevenana ny kitapom-bola hanatanterahana ny asa no tanjon’ny ONG mandritra ny taona 2019. Tsara ho fantatra fa ONG iraisampirenena miasa amin’ireo firenena misy ady, marefo amin’ny loza voajanahary sy ny valan’aretina ary miezaka mampihena ny fahorian’ireo traboina ny Medair. Nirina R. ONG MEDAIR DON DE SANG Cet article ONG MEDAIR: Fomba tsotra nefa manavotra aina ny fanomezan-drà est apparu en premier sur déliremadagascar.
Paikady hiarovana ny ala : hamolavola vinavina momba ny tebokafo ny teknisianina
“Tao anatin’ny roa taona farany (2019-2020) nihena ny faritra may teto amintsika raha ny taona 2018 no tena nirongatra ny doro ala. Anisan’izany ny ilany andrefana sy atsimo”, araka ny fanazavan’ny mpikaroka ao amin’ny Land Dev, Rakoto Ratsimba Harifidy, omaly, teny Antaninarenina.Nahatratra 6 tapitrisa ha ny velarana levon’ny afo telo taona lasa raha nihena 5 tapitrisa ha izany ny taon-dasa. Ny zavatra voamarika, miverina mahazo vahana ny afo amin’izao fotoana izao maneran-tany; Aostralia, Portugal, Californie… noho ny fahamainan’ny tany ka mora mirehitra raha vao misy tsioka mafimafy. Nampahafantarina teny Antaninarenina ny paikady nasionaly fitantanana ny afo eto Madagasikara satria tsy tratra ny vina hanamaitso ny Nosy raha tsy harovana amin’ny afo ny faritra voavoly zanakazo, hoy ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, Raharinirina Baomiavotse Vahinala. Nijery paikady vaovao ny mpikaroka ary mila fitaovana ny mpisehatra eny ifotony ary izany no fototry ny fiaraha-miasa amin’ny Alemana (GIZ). Mila fantarina ny tebokafo mety hiteraka fahapotehana ka tokony manana olona eny ifotony manara-maso izany ny fokontany sy ny kaominina.Fanentanana tsy hanao tavy intsonyOmena fahefana izy ireny hanao fanairana mialoha raha tombanana fa misy tandindon-doza amin’ny mety fiforonan’ny afo. Manomboka izao, hamolavola vinavina momba ny tebokafo ny teknisianina ary haparitaka amin’ny tomponandraikitra mila izany hiomanan’izy ireo, araka ny fanambaran’ny minisitra mpiahy ihany. Ho azo refesina sy ampitahaina isan-taona koa ny faritra may ka tanjona mba hihoatra ny velarana lasa lavenona ny faritra voavoly azo, ny taona 2023. Hametraka fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fambolena koa ny minisiteran’ny Tontolo iainana hanentanana ny tantsaha tsy hanao tavy intsony satria ny 90% ny fanajariana ny tany hambolena dia mbola miankina amin’ny tavy avokoa. Indraindray tsy voafehy izany afo izany ka mandoro velarana lehibe mihoatra ilay hovolena.Vonjy A.L’article Paikady hiarovana ny ala : hamolavola vinavina momba ny tebokafo ny teknisianina a été récupéré chez Newsmada.